Noocyada ugu Muhiimsan ee Mozenda Qiyamka Sida ku Xusan
Mozenda waa warshad xogeed oo ururisa macluumaadka laga helo internetka, waxay abaabisaa mareegta
oo ku habboon qaab haboon iyo si aad u hesho isla markiiba dhakhso ah. Waxaad si sahlan u habayn kartaa xogtaada oo aad abuuri kartaa qaybaha kala duwan ee bogagga shabakad leh qalabkan cajiibka ah.
Ujeedada Mozenda waa in la kobciyo khibradaha bani'aadamka ee dadka. Waxay bedeshaa amarrada kombuyuutarka waxayna sameyneysaa barxad, navigation iyo xog-saaridda sahlan oo degdeg ah. Faa'iidooyinka iyo qiimaha Mozenda waxay ku dhex jiraan doorashooyin kala duwan iyo xog ururinta xogta. Ma aha oo kaliya ururinta xogta dadka isticmaala, laakiin sidoo kale waxay u noqoneysaa qaababka sida TSV, XML, iyo CSV. Ka dib, waxaad ku kaydin kartaa xogtan iyadoo loo eegayo baahiyahaaga oo aad u falanqeynayso tayada iyada oo la isbarbardhigayo boggaga internetka ee kala duwan.
Mozenda waa mid ka mid ah xogta Qalabka burburinta ee ka caawinaya xoqidda iyo abaabulidda xogta ku salaysan ereyada muhiimka ah. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ka tirtirto xogta laga helo dukaanka tafaariiqda sida Amazon ama eBay, waxaad u baahan tahay inaad muujiso ereyada muhiimka ah iyo xogta aad rabto inaad xoqdo una ogolaato Mozenda inay hawsheeda qabato. Waxay si fudud u qabanqaabin kartaa, xoqin lahayd oo loo dhisi karaa xogtaada, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon aragtida SEO.
2. Aad u fiican Instagram iyo Twitter Hashtags
Hashtags waxay noqdeen isbeddel dhab ah ee Twitter iyo Instagram..Iyadoo Mozenda tahay, kaliya ma xoqin karto xogta laakiin sidoo kale waxaad ku heli kartaa dad cusub Instagram iyo Twitter. Si kale haddii loo dhigo, qodobkan cutubka shabakada wuxuu ka dhigayaa cilmi-baarista warbaahinta bulshada oo sahlan oo wuxuu ku siinayaa macluumaadka khuseeya oo keliya.
3. Mozenda wuxuu ka caawiyaa kordhinta taageerayaashaada
Ganacsatada digitalka ah iyo kuwa websaydhku waxay marwalba ka walaacayaan horumarinta warbaahinta bulshada. Waxay qabtaan dhowr siyaabood iyo istiraatiijiyad si ay u bilaabaan una hormariyaan astaanta. Iyada oo Mozenda, waxaad sii kordhin kartaa taageerayaasha warbaahinta bulshada oo aad ka heli kartaa waxyaalo badan. Qalabkan shabakada buuggu wuxuu ka dhigayaa macluumaad ka yimid goobaha shabakadaha bulshada, oo ku siinaya natiijooyinka ugu fiican ee suurtogalka ah iyo kordhinta tirada taageerayaashaada.
4. Taageeraya qaabab kala duwan
Si ka duwan qalabyada caadiga ah ee shabakadda, Mozenda waxay taageertaa qaabab badan oo ay ka mid yihiin JSON, Google Docs, iyo CSV. Waxaad sidoo kale soo dhejin kartaa xogta la xoqay ama la soo saarey qalabka aad jeceshahay ama ku kaydi diskkaaga.
5. Wuxuu xusuustaa macluumaadka meelaha kala duwan ee safarka
Mozenda waa mid ka mid ah barnaamijyadahan shabakada ah ee ka caawiya soo saarida macluumaadka ka imaanaya goobaha safarka ee adag sida Iskuulka iyo Trivago. Waxaad ubaahan tahay inaad muujiso xogta aad rabto inaad xoqdo una ogolaato Mozenda shaqadiisa. Dhab ahaantii, waxay macluumaadkaaga ku heli doontaa qaab qaabaysan oo loo akhrisan karo, saacad gudaheed.
6. Wanaagsan sawirada
Waxaa jira dhawr barnaamij oo shabakad ah oo adeega shabakadaha iyo qalab aan taageernin sawirada oo aysan ka soo saari karin xogta laga helo sawirada tayo sare leh. Laakiin Mozenda waa sawirka kaliya ee shabakad ka bixiya macluumaadka sawirada, fiidiyoowga, iyo maqalka waxayna u kaydisaa qalabkaaga ujeedooyinka ganacsi Source .